बालकोट पुगेर प्रभु शाहले ओलीलाई के भने ? — Sanchar Kendra
बालकोट पुगेर प्रभु शाहले ओलीलाई के भने ?
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन आज (शुक्रबार) सुरु हुँदैछ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज मध्यान्ह १२ बजे विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार उद्घाटन सत्रपछि बन्द सत्रमा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। यता पार्टी केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर आफ्ना माग पुरा नभए अधिवेशन नै बहिस्कार गर्ने ध’म्की दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले विहीबार बिहान १० बजे पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहलाई आफ्नै निवास बालकोटमा बोलाएका थिए । असोज १५ देखि गोदावरीमा हुने विधान अधिवेशन ‘बहिस्कार’ गर्ने बताइरहेका साहलाई फकाउन ओलीले बालकोट बोलाएका हुन् ।
पूर्वमाओवादीबाट रामबहादुर थापा बादलसँगै एमालेमा मिसिएका पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साहले आफू अझै एमाले हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उनले एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बहिस्कार गर्दै आएका छन् । केपी ओलीको क्याबिनेटका मन्त्रीसमेत रहेका साहले अध्यक्ष ओलीसँग विभिन्न ८ वटा माग राखेका छन् । यी माग पूरा नभए विधान महाधिवेशनमा सहभागी नहुने साहको अडान यथावत छ ।
विहीबार बालकोटमा भएको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले साहका मागप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै महाधिवेशनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, साहले मौखिक आश्वासनले मात्रै नहुने भन्दै आफ्ना मागबारे एमालेले औपचारिकरुपमै निर्णय नगरेसम्म महाधिवेशनमा भाग लिन नसक्ने जवाफ ओलीलाई दिएका छन् ।
बालकोटमा अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता सकेपछि साहले भने, ‘अध्यक्षसँग सकारात्मक कुरा भएको छ । उहाँले विधान अधिवेशन र बैठकमा आउनुपर्यो भन्नुभयो, मैले त्यसरी सहभागी हुने–नहुने तपाईंको हातमा छ भनें । हामीले उठाएका सकारात्मक कुराहरु सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने आउने वातावरण बन्छ भनें । यदि त्यो स्वीकार्नुहुन्न र असहमत हुनुहुन्छ भने सायद म आउदिनँ भनेको छु । उहाँले म सहमत छु, मिलाउँछु भन्नुभएको छ । पार्टीको स्पष्ट धारणा आएन भने महाधिवेशनमा जान सकिँदैन ।’
उनको भनाइ उनकै शब्दमा: ”अब कानूनी ढंगले त हामीलाई एमाले भनि पनि राखेको छ, हामीले त्यसलाई अन्यथा पनि लिएका छैनौं । वैचारिक, राजनीतिक ढंगले यदि एमाले नेकपाको निरन्तरता हो भने हामीलाई स्वीकार्न केही गाह्रो छैन । यदि पुरानै ढाँचाबाट जुन अभ्यास भइराखेको छ, त्यो यथास्थितिको एमाले त होइनौँ हामी ।
मलाई आश्चर्य लाग्छ । नेकपाबाट एमाले ब्युँतिसकेपछि यो नेकपाकै निरन्तरता हो भनेर नेताहरुले भनिराखे हामीलाई । व्यवहारतः त्यो देखिएन । यसका कारण केहो–केहो जस्तो अन्योलको स्थिति सिर्जना भयो । कि त एमाले नै हुनुपर्ने थियो भने तपाईं एमाले हुने कि नहुने भनेर हामीसँग सोध्नुपथ्र्यो । यदि नेकपाकै निरन्तरता हो भने एमालेको अभ्यास गर्नु हुँदैनथ्यो । त्यसैले यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि नेकपा एमालेकै नेताहरुसँग सोध्नुभयो भने राम्रो हुन्छ ।
किनकि, नेकपाकै एउटा हिस्सा केपी ओलीजीलाई हामीले साथ दिएको हो । अदालतले एमाले ब्युँत्याइदिएपछि उहाँले एमालेकै अभ्यास गर्छु, तपाईंहरु एमालेमा आउनुहुन्छ या आउनुहुन्न भनेर सोध्नुपर्ने हो । हाम्रो नाम त्यहाँ सुनियो । र, हामीले भेट्दा यो नेकपाकै निरन्तरता हो, पुरानो एमाले होइन र हुन पनि सक्दैन भनिराख्नुभयो । तर, गरिराख्नु के भयो भने एमाले नै गरिराख्नुभयो । त्यसैले अब यसरी त जान सक्दैनौं भनेर हामीले केही विषयहरु उठान गरेका छौं ।
सबैको संख्या र मात्रा कम बेसी त होला । तर, मैले राखेको पोइन्ट जति पनि माओवादी पक्षबाट एमालेमा आवद्ध छन्, ती सबै साथीहरुको भावलाई समेटेर राखिएको विषय हो । र, टोपबहादुर रायमाझीजीले क्रियट गरेका बुँदाहरुलाई हामीले व्यवस्थित गरेको हो । त्यसैले यो प्रभु साहको मात्रै होइन । प्रस्तुत मैले गरेको हो, तर आम माओवादी पक्षको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले राखेका हौं । यथास्थितिमा त हामी एमाले छैनौं । नयाँ स्थिति बन्यो भने एमालेबाट अलग हुनुपर्ने कुनै कारण पनि देख्दिनँ । अब तपाईंले एमालेमा प्रस्तुत गर्नुभएका आठबुँदे मागबारे बुँदागत छलफल गरौं ।
नाम र अदालतको निर्णयले कानूनतः एमाले भनिए पनि हामीले नेकपाकै एउटा हिस्साका रुपमा बुझिराखेका थियौं । तर, कस्तो देखापर्यो भने नेताहरुले अदालतको बाहना बनाउँदै, अदालतले बनाइदियो भन्दै साँच्चिकै एमालेको विधानतः अभ्यास गर्न थाल्नुभयो । एमालेको विधानतः अभ्यास गर्न थालेपछि माओवादीबाट आएका साथीहरुको पोजिसन के हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर हुँदै आयो । सुरुमा आयोजक कमिटी थियो, त्यसलाई अलिकति हामीले एडजस्ट गर्न खोजिरहेकै थियौं । त्यसपछि केन्द्रीय समिति ब्युँतियो । त्यसपछि फूल फेजका सबै संरचना र विधि विधानहरु ब्युँतिए । त्यसो भएपछि गम्भीर स्थिति सिर्जना भयो र हामीले भन्यौं, यो एमाले नै हो भने प्रष्ट पार्नुपर्यो, त्यसपछि हामी एमाले स्वीकार्न या त तयार हुनुपर्यो, या अर्को निर्णय गर्नुपर्यो । नेकपाकै निरन्तरता हो भने हामीलाई केही समस्या छैन । एमाले हो भने सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्दै आएका थियौं ।
पछिल्लो चरणमा खास गरेर अध्यक्षकै निर्देशनमा जस्तो लाग्छ, एउटा कार्यदल निर्माण भयो । त्यो कार्यदलको बैठक पनि बस्यो । त्यो कार्यदलमा भएको छलफललाई मैले अहिलकति पोइन्ट आउट गरें र पछिल्लो समय अध्यक्षसँग बसिसकेपछि खासै निचोडमा पुग्न सकिएन । त्यसपछि यथास्थितिमा थियो । तर, आज अध्यक्षसँग पोजेटिभ नै कुरा भएको छ । यदि पोजेटिभ सम्वोधन भयो भने हामी सकारात्मक रुपले नै लिन्छौं ।